I-Nomad Leop Loop yee-AirTags | Ndisuka mac
I-Nomad Leop Loop yee-AirTags
Namhlanje kwintengiso kukho izinto ezininzi ezikhoyo kwiApple Airtag. Okwangoku uninzi lwenu sele ninaso isitshixo, izinto zebhayisekile, njl. kodwa uNomad uyaqhubeka nokusungula izixhobo ezintsha kwaye kule meko sinethuba lokuzama "okwahlukileyo" Isangqa esisisitshixo seLoop yeAirTags.
Ngale ndlela, kukho ii-keyrings ezininzi zee-AirTag zethu kwintengiso, kodwa ngesikhumba kunye nomgangatho weNomad, sele sisazi ukuba bambalwa okanye kuphela ezo iApple uqobo isinika zona. Ngayiphi na imeko, le nto incinci iya kwenza isixhobo sethu sendawo ingaqhutywa phakathi kwezitshixo ezixhonywe kubhaka okanye naphina ngaphandle koloyiko lokulahleka.
I-Nomad Leop Loop
Singatsho ukuba umgangatho ngokubhekisele kokugqitywa kwesi sitshixo sesikhumba ulunya nje. Ngaphakathi kwi-keychain yongeza isitikha esi-macala-3M esiqhelekileyo okwenza ukubekwa kwesi sixhobo kube lula kwaye ukubamba kukhuselekile. Kudala sinxiba i-keychain okwexeshana kodwa singatsho ukuba umgangatho we-3M ngokwendlela yokuhamba kwexesha uhlala ulungile, kwi-keychain kwaye njengoko sibonile ukuba i-AirTag iyabambelela kuyo, siqinisekile ukuba izakubamba kakuhle.
Isikhumba esenziwe ngaso ezi zinto zivela kwinkampani eyaziwayo yaseChicago, iHorween Leather Co., yenye yezona ndawo zintsimbi zokwakha eUnited States. Ixesha elingaphezulu, imifuno eluhlaza eskitshiweyo iguqula ukubonakala kwayo, ikhulisa ukugqitywa esinokuthi kuyingqayizivele kule nto. Ukususela kusuku lokuqala ukuya kwimini eyi-100, ii-fobs zethu eziphambili ze-AirTag ziya kunyamezela ngokunxiba kwendalo kunye neenyembezi eziza kubonelela ngomlinganiswa onomtsalane nowahlukileyo kwinto yokufikelela.
Isitshixo esahlukileyo, esilula kunye nomgangatho
Ngokwesiqhelo, amaqhosha esitshixo asisixhobo esenziwe yi-Apple anikezela ukhetho lokufaka i-AirTag uqobo ngaphakathi kwendandatho okanye ibhegi. Kule meko, imodeli yeLeather Loop yahlukile kwaye iyasivumela Ngqo nca isixhobo ngaphakathi kwesi sitshixo ukushiya isangqa sezitshixo kwinxalenye ephezulu simahla.
Isixhobo sifumaneka ngemibala emithathu: ukhilimu, omnyama nomdaka. Ungayifumana kwifayile ye- Indawo esemthethweni yeNomad nakwabanye abasasazi abasemthethweni beli lizwe lethu. Ixabiso lale keychain yesikhumba lime kwi- $ 24,95 kwiwebhusayithi esemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Nomad Leop Loop yee-AirTags
Elinye ibhaso kuthotho "Ted Lasso"
Itreyila entsha yexesha lesibini likaTed Lasso